IBM yakatenga BoxBoat kusimudzira iyo yakasanganiswa yegore gore padhuze neOverShift | Linux Vakapindwa muropa
IBM yakatenga BoxBoat kusimudzira iyo yakasanganiswa yegore gore padhuze neOverShift
IBM inoramba ichiwedzera bhizinesi rayo munzira dzese uye munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti yawana yayo yegumi neimwe kambani masvondo akati wandei mushure mekuvhara kutenga kwekushandisa uye network performance management kambani Turbonomic. Iyo kambani nyowani iyo tekinoroji hombe yawana ndiBoxBoat DevOps kubvunza kuri muBethesda, Maryland uye Kubernetes mupi webasa rezvemabhizinesi. Mamwe makambani akawanikwa neBM anosanganisira 7Summits, Waeg, Taos, MyInvenio, StackRox, Nordcloud, WDG, TruQua Enterprises uye Instana.
Kufarira kweBM muBoxBoat ndiko kuti Kutanga Inopa Enterprise Kubernetes uye Container Adoption Strategic Services seHybrid Cloud Solution Enablers; pamwe neapplication containerization, DevSecOps, dzidzo, kudzidziswa uye magwara ezvishandiso zveDevOps uye mafashama ebasa. Vatengi vake vanobva kunhengo dzeFortune 100 kuenda kumasangano ehurumende yeUS. Vamwe vayo vanosanganisira AWS, Microsoft Azure, uye Google Cloud. Iyo zvakare ndeye yekutanga yakasimbiswa yehunyanzvi sevhisi masevhisi mudiwa weGitLab.
Nekutsvaga kutsva uku IBM haingogadzirise chete kupa kwayo kwazvino gore rakasanganiswa, asi zvakare iri idanho re kusimudzira iyo yakasanganiswa gore nzira "OpenShift" Uye zvakare, anotarisira kuti chibvumirano ichi chichawedzera kugamuchirwa kweiyo OpenShift chikuva, uye anorongawo kuwedzera hunyanzvi hweBoxBoat yemidziyo kuti imubatsire kuwedzera kubvumidzwa kweOpenShift.
Bhokisi reBoatBoat hunyanzvi huchafambisira mberi IBM's OpenShift zano nekuti mhando dzemabhizinesi akaomesesa software mapurojekiti ayo IBM anokwikwidza neOpenShift kazhinji anosanganisira ekuona masevhisi. Icho chikonzero ndechekuti kunyangwe tech-savvy masangano dzimwe nguva anoda rubatsiro rwekunze nechero technical technical kana imwe. Nekudaro, iyo yakawanda yekubvunza masevhisi IBM inogona kupa pamwe neOpenShift, zvichave nyore kuita chikuva uye nekudaro kudzikisira chipingamupinyi chekupinda kwevatengi vatsva.
Kubvunza uye nehunyanzvi masevhisi ndiyo hombe sosi yemari yeIBM. Kota yekupedzisira, iyo Global Business Services unit umo BoxBoat Technologies ichaverengerwa yakatumirwa mari ye $ 4.200 bhiriyoni. Pakazara, IBM inofungidzira kuti musika wehunyanzvi gore masevhisi wakakosha madhora mazana maviri emadhora pagore.
BoxBoat inobatsirawo vatengi vane zvinoenderana mabasa. Iyo kambani inoshanda nemasangano anomisikidza nharaunda mamiriro, mune yeruzhinji gore kana kumwe kunhu, kumhanyisa kwavo kunyorera nyowani mumidziyo. Nesarudzo, iwe unogona kutora pamusoro pekuchengetedza kwemazuva ese kweavo maapplication kusunungura zviwanikwa zvekambani yemukati ruzivo ruzivo matimu.
Yezvikwata zvekuvandudza software, zvakare, BhokisiBoat rinopa rubatsiro mukugadzirisa DevOps mapaipi. Chiteshi cheDevOps muunganidzwa wemidziyo yesoftware iyo inogonesa vanogadzira kambani kuti vagadzire mashandiro nekukurumidza nekuita mabasa anopedza nguva.
Sekureva kweBM, BoxBoat yapedza zvirongwa zvemakambani mazhinji eFortune 100 nemasangano ehurumende.Femu iyi ine kudyidzana kwegore neAmazon Web Services Inc., Microsoft Corp. neGoogle LLC. Ichave chikamu cheiyo yakasanganiswa gore kudzidzira mune IBM's Global Bhizinesi Services bhizinesi.
“Vatengi vedu vanoda kuvaka gore rinovabvumidza kushanda munzvimbo yechinyakare yeIT, gore rakazvimirira uye makore eruzhinji. Ndiwo moyo wedu wegore wakasanganiswa, "akadaro John Granger, mutevedzeri wemutevedzeri wemutungamiri wemakore emhando yepamusoro kuIBM. "Hapana gore remazuva ano chirongwa chingabudirire pasina nzira yekudyara, uye BhokisiBoat iri pamberi pegadziriro yebasa remidziyo."
BoxBoat ndiyo yechitatu-yakatarisana neyekusimbisa femu iyo IBM yakawana mumwedzi ichangopfuura kusimbisa chikamu ichi chebhizinesi rako. Pakutanga, Taos Inc yakatengwa. uye Nordcloud Ltd., iyo yaive nemari yegore negore inodarika madhora makumi matanhatu nemasere emadhora panguva yekutenga.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IBM yakatenga BoxBoat kusimudzira iyo yakasanganiswa yegore gore padhuze neOverShift
Pasi rese akadaro
Kunyanya, izvi zvinei chekuita neLinux?
Pindura Munhu wese
Izvo hazviite nguva dzose, iyo pentagon inokanzura chibvumirano chayo cheJEDI neMicrosoft uye zvakare inokumbira zvikumbiro
VKD3D-Proton 2.4: kunze nekuvandudza mashandiro